साम्राज्ञीको यो कस्तो चाला ? « Intro Nepal
साम्राज्ञीको यो कस्तो चाला ?
Published On : ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार १८:२९
नायिका साम्राज्ञी आर एल शाह पछिल्लो समय नेपाल कि नम्बर १ नायिका हुन् भन्दा फरक नपर्ला । ड्रिम्सबाट सुरु भएको उनको फिल्मी यात्रा मारुनी, रातो टिका निधारमा सम्म आइपुग्दा उनले पछाडी फर्कन परेको छैन । तर, बेला बखत सार्वजनिक हुने उनका तस्बिरले भने सामाजिक सञ्जाल तताउने गरेको छ ।
केही समय अगाडी उनको ट्याटु खोप्ने क्रममा खिचिएको आधा छाती देखिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । हाल उनको त्यस्तै तस्बिर पुन सार्वजनिक भएको छ । एक पछी अर्को यस्ता तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुँदै जाने हो भने साम्राज्ञीलाई दर्शकले कुन नजरले हेर्लान् ?